Ugwu Galicia. Choputa ihe nile banyere geology | Netwọk Mgbasa Ozi
Ihe omumu ihe banyere ala nke Iberian Peninsula bu ihe uto nke oma ma adighi egbochi iju anyi anya. Taa anyị na-eme njem ugwu nke Galicia nke malitere ịmalite nde afọ 350 gara aga. N'ihi nkwekọrịta nke nnukwu efere kọntinent abụọ a na-akpọ Gondwana na Laurasia, enwere ike ịmalite ebe dị iche iche mara mma maka Galicia. Anyị na-achọta ọtụtụ isi na-anọchi anya akara ala ebe ọ bụ na e guzobere ya.
Soro anyi n’isiokwu a site na oge Paleozoic rue ugbua ka imata oke ugwu Galicia.
1 Kpakọba nke Campodola Leixazós
2 Ọnụ ọgụgụ dị nsọ
3 Granite massif nke O Pindo
5 O rozaro-Xallas nsụda mmiri
6 Ourense Depression-isi iyi nke osimiri Miño
7 Nhazi nke usoro ndi Galician na usoro nke uzo
Kpakọba nke Campodola Leixazós
Anyị malitere njem a site na ugwu nke Galicia site n'ogige atụrụ nke ekwuputara na 2011 dị ka ihe ncheta ihe ọmụmụ ala na ebe nke International Geological Interest. Ọ bụ usoro ihe ọmụmụ banyere ala nke na-agafe Galicia niile, nke a na-ahụkarị ọpụpụ ya na Courel. Na geology, A na-amụ usoro na usoro metụtara folds nke ala ahụ. Agbanyeghị, ịnweghị ike ịmata ya nke ọma na ihu ma hụ folda ahụ. N'okwu a, anyị na-ahụ mpịachi n'ịdị ebube ya niile n'ụzọ ga-eme ka anyị nwee ike ịhụ otu igwe mmadụ abụọ si na-agbakọ.
Mgbe ngwakọta nke efere kọntinent abụọ a, e guzobere kọntinent buru ibu a maara dị ka Pangea. Anyị nwere ike ikwu na ọ bụ nke mbụ recognizable mmetụta nke ọkwa mbu nke etolitere Galicia ihe karịrị 500 nde afọ gara aga. N'ihi nke a, o nwere aha a ma ama, ebe ọ bụ na ọ nwere mmasị pụrụ iche nke obodo.
Ọnụ ọgụgụ dị nsọ
Nke a bụ mmetụta nke abụọ nke a ga-amata na mpaghara niile nke ọkwa ọzụzụ nke Galicia. O nwere nnukwu ego nke quartz, ala granite, wdg. Akụkụ nke ugwu Galician bụ ihe mejupụtara n'ihi mmegharị nke tectonic efere nke mere n'oge Paleozoic ihe dịka nde 400 gara aga.
Nke a dị elu dị ezigbo mkpa na akụkọ gbasara ala nke Galicia. Nke ahụ bụ ebe ha na-welded efere tectonic abụọ na-ada ma mepụta ọdịdị ala ala. Na mbu, ugwu nke ebe di elu nke quartz ga - agbatị ihe a maara dị ka Laurasia na, na ndịda, Gondwana, nke bụ onye ga-ama oke ókè dị na Galicia.
Granite massif nke O Pindo
Ihe ọzọ metụtara nkukpọ a nke anyị na-ekwu maka ya. A na-amata ya ọbụna na ndụ ugbu a ma na ekele maka ya, ị nwere ike ịmụ ọtụtụ ihe gbasara oge gara aga. Granite bụ nkume mbụ malitere na Galicia. Nke a bụ ihe dịka 300 nde afọ gara aga.
Ihe omimi nke otutu a na-ezo aka na aru di omimi nke emere ka o di n'ime ala di omimi nke ihe dika 20 kilomita. Ebe ọ bụ na ihe omumu banyere ala Dị ka ozize na-eme ihe ruo 300 nde afọ, taa, anyị nwere ike ịhụ dum elu ebe Oge Mesozoic.
Na Cabo Ortegal anyị hụrụ ọtụtụ ugwu dị iche iche kwekọrọ na agba nke abụọ e guzobere Galicia. Ihe dịka narị afọ abụọ gara aga, na mbido Mesozoic, nnukwu kọntinent a maara dị ka Pangea malitere iberibe. N'ihi nke ahụ, nọ na-eme ka thegbè Iberia na-ekewapụ ma na-ekewa. Movementgha a bụ nke butere ụsọ mmiri nke Galia site na ugwu ruo na ọdịda anyanwụ.
A maara ugwu ndị a dị ka eriri, n'ihi na ha nọ n'ime nnukwu efere a maara dị ka Pangea. Ọ bụghị ugwu a kpụrụ site na mbuze mmiri kemgbe ọtụtụ afọ. N'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ bụ mmalite nke nnukwu efere kpụrụ ha, echekwara ha nke ọma. Nke a bụ n'ihi na ndị na-ahụ maka ala anaghị enwe ike ime ihe ogologo oge kpatara uwe a.
O rozaro-Xallas nsụda mmiri
Ọ bụ akụkụ ọzọ nke ugwu Galicia na guzobere afọ 145 gara aga. Osimiri ndị gafere ebe a na-akpọ Galicia ugbu a nwere ike iru oke osimiri ahụ wee rute na ya. Mgbaze mmiri nke osimiri na-akpata n'oge a niile bụ ihe kpatara enyemaka nke ndagwurugwu nke Galicia.
Osimiri mbuze nwere okwute ndi na-eguzogide ọgwụ, obu ezie na osimiri apughi igwu omimi nile nke ndagwurugwu. Ihe kachasị anya nke anyị nwere banyere mbuze mmiri bụ nke anyị nwere ike ịhụ na nsụda mmiri nke Osimiri Xallas.
Ourense Depression-isi iyi nke osimiri Miño
Ihe omuma ozo anyi nwere ike ihu ma nke ahu n’enye anyi otutu ihe omuma banyere geology nke Galicia. Anyị na-atụ anya ugbua ihe ruru obere nde afọ 2,5. Ugwu ugwu Cantabrian dum gbatịrị gaa ndịda ruo mgbe ha ruru Celanova. N'oge nlegharị ya, ọ na - agbaso usoro trenic tectonic nke na-arụ ọrụ kemgbe njedebe nke Ogechi. Ọ bụ ili ndị a niile na-egosi nkụda mmụọ nke Ourense nke a mụrụ site na osimiri Miño,
Akụkụ ụfọdụ nke netwọk mmiri na-agagharị n'ógbè ahụ bụ ịda mbà n'obi na-ebugharị. Agbanyeghị na Osimiri Miño bụ ọdụdụ nwa na mmiri niile nke Galician, ọ bụ nke nwere ihe kachasị asọpụta na, ya mere, nke kachasị mkpa.
Nhazi nke usoro ndi Galician na usoro nke uzo
E mekwara mkpị maka ụyọkọ kpakpando n’elu ugwu Galicia. Mmetụta dị na ihu igwe na mgbanwe ndị ọzọ n'oge Quaternary na-akpata ụfọdụ mpaghara doro anya n'ụsọ osimiri. N'otu aka, enwere usoro nke esemokwu na-esite na ihu igwe na-ekpo ọkụ na usoro ndị ọzọ na-efe efe na ihu igwe oyi. N'oge oge na-ekpo ọkụ, ice na-agbaze na oke osimiri dị elu. Nke a mere ka mmiri oké osimiri ahụ banye n'ime ime kọntinent ahụ. Nke a bụ otu esi akpụ akpụ dị ka anyị si mara ha taa. Oke osimiri niile banyere rue n'ikpe-azụ nke osimiri nile, idei mmiri juputara na ihe niile.
Guzo nke dunes kwekọrọ na usoro na ihu igwe oyi. N'oge ahụ, ihu igwe dị jụụ, ya mere ọkwa oke osimiri dị ala. Ya mere ọ nọrọ a na-ekpughere ikpo okwu n'ụsọ oké osimiri ma kpuchie ya na ájá n'ihi na mbufe nke mbuze.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere geology nke ugwu nke Galicia.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ugwu Galicia